6 Askari American Ah oo lagu Dilay Weerar Ka Dhacay Bariga Wadanka Afghanistan.
Tuesday May 02, 2017 - 08:55:21 in Wararka by
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamada dowladda Mareykanka lagu gaarsiiyay wadanka Afghanistan kadib weerar xooggan oo lala beegsaday kolonyo melleteri.
Sawir Hore ciidamo Mareykan ah oo dhimasho iyo dhaawac ka daabulanaya Afghanistan
Wararka ka imaanaya gobolka Nangahaar ee dhaca Bariga wadanka Afghanistan ayaa sheegaya in gaari walxaha qarxa lagasoo buuxiyay oo uu kaxaynayay dagaalyahan naftiis huri ah uu beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidanka gaarka ah ee Mareykanka.
Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid Afhayeenka Imaarada Islaamiga Afghanistan ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in weerarka ay ku dileen 6 askari islamarkaana ay burburiyeen gaari gaashaaman.
Guddoomiyaha gobolka Nangahaar ugu magacaaban xukuumadda dabadhilifka Kaabul ayaa isna qiray in weerar xooggan ciidanka Mareykanka lagula beegsaday tuulada Baati Koot oo gobolka Nangahaar katirsan balse wuxuu beeniyay in khasaara dhimasho iyo dhaawac ah uu gaaray ciidanka Mareykanka.
Warka kasoo baxay Taliban ayaa lagu sheegay in weerarka istish-haadiga ah uu fuliyay Arday lagu magacaabi jiray Saciid oo dhiganayay mid kamida Jaamacadaha gobolka Laghmaan ee wadanka Afghanistan.
Weerarkan ayaa imaanaya maalmo kadib markii 300 oo katirsan ciidanka Mariinizka Mareykanka loo daad gureeyay gobolka Helnmand ee Koonfurta dhaca islamarkaana intiisa badan ay maamusho xarakada Islaamiga Taliban.
Khasaaraha ayaa kusii xoogeysanaya sufuufta ciidanka Mareykanka ee Afghanistan ku duulay tan iyo markii Donald Trump uu hoggaanka uqabtay Aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo.